सबैभन्दा महिलाहरु को मद्दतले वजन laxatives। तिनीहरूले यो तपाईंलाई द्रुत घृणा किलोग्राम रिसेट toxins को शरीर शुद्ध कसरी छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर यो विधि कसरी सुरक्षित छ? लोकप्रिय माध्यम विचार गर्नुहोस्। प्रभावकारी वजन लागि "Senade" लागूपदार्थको हुनुहुन्छ? यस दबाइ लिन मानिसहरू को समीक्षा यसलाई साँच्चै वजन तीव्र हानि योगदान भन्छन्।
एक चमत्कार उपचार संग endowed अद्वितीय गुण के-के हुन्?
Senna aquifolium (तेजपात) - यो पूर्णतया प्राकृतिक उत्पादन औषधीय बिरुवाबाट बनाएको छ कि बाहिर जान्छ। Senna एक रेचक औषधि असर गर्छ र अक्सर शुद्धीकरण लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको शुद्ध रूप मा, यो लगभग सानो रकम यो औषधि थपिएको छ प्रयोग कहिल्यै छ। म वजन लागि "Senade" प्रयोग गर्नुपर्छ? विशेषज्ञहरु विरोधाभासपूर्ण समीक्षा, धेरै संकेत गर्दा यी धन मात्र निर्धारित पर्छ भनेर दाबी गर्छन्।
हो, अक्सर आंतों peristalsis बढाउने, पुरानो कब्जियत र मोटोपना लागि प्रयोग Senna रूपमा लागूपदार्थ, शुद्धीकरण प्रक्रिया normalizes र कुर्सी स्थिर। साथै, यसको सदस्य Senna पात परिणाम एक व्यक्ति तरल धेरै हराउछ रूपमा toxins र विषाक्त पदार्थ अवशोषित र यो वजन खोने छ। नोट - क्युटेनियस बोसो जलाए छैन!
अवधि ट्याब्लेटको को आवेदन "Senade" तीन दिन भन्दा बढि हुँदैन। अधिक दबाइ को दीर्घकालीन प्रयोगले जठरांत्रिय पर्चा को विकार सक्छ। यो पूरक आहार बुझाउँछ कि laxatives गर्न, बोसो बल्न होइन बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
जब तपाईं वजन लागि "Senade" लागू गर्न सक्नुहुन्छ?
समीक्षा सबैभन्दा महिलाहरु आफ्नो सफाई गुणहरू पुष्टि, तर धेरै अवलोकन पेट दुखाइ को लामो समयसम्म प्रयोग पछि, defecate गर्न बारम्बार चाहनाको, कमजोरी, फ्रेंच र वाकवाकी। तपाईंले केही किलो गुमाउन छोटो समय आवश्यक छ भने, दबाइ लामो मदत गर्न सक्छ यो प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईं तयार र शुद्ध गर्न शरीर मदत गर्न सक्छ त - यो आहार अघि प्रयोग गर्न उचित छ। खाने वा लामो भोजमा पछि पनि ट्याब्लेटको प्रयोग "Senade" सुझाव दिन्छौं।
अनुचित प्रयोग वा लामो समय को लागि प्रयोग यस्तो ऐंठन, वाकवाकी, छाला दाना, electrolytes को हानि (सहित मलको), hematuria, पखाला रूपमा अप्रिय लक्षण हुन सक्छ। पनि convulsions, circulatory पतन, albuminuria र उल्टी - साथै, सुनिंनु, को आंतों mucosa मा melanin जम्मा, र गंभीर अवस्थामा हुन सक्छ। यी सबै तथ्य अप्रिय क्षणहरू अनुभव गरेका छन् जो वास्तविक मान्छे पुष्टि गर्नुहोस्।
हामी दबाइ धेरै खराब ऐंठन हुन सक्छ किनभने, गर्भावस्था को समयमा "Senade" को प्रयोग गर्न सिफारिस छैन। एक परिणाम स्वरूप, पहिले जन्म वा गर्भपात परिणाम संभावना छ जो पेरिटोनियम, को मांसपेशी contractions थाल्छन्। cystitis, peritonitis,: गर्भावस्था साथै, त्यहाँ अन्य लागूपदार्थ contraindications छन् strangulated हर्निया, uterine र जठरांत्रिय रक्तस्राव, पेट मा गंभीर दुखाइ, पानी-इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स को उल्लंघन।
धेरै मानिसहरू वजन लागि "Senade" चिकित्सा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यस दबाइ को समीक्षा अत्यन्तै नकारात्मक गर्न उत्साहित देखि सङ्कलन। यसैबीच, विशेषज्ञहरु हर्बल उपचार यदि गलत तरिकाले प्रयोग पनि स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग निम्त्याउन सक्छ कि चेतावनी।
"अल्फा Tocopherol एसीटेट।" अर्थ विवरण। dosing
Vishnevsky मलम - यो निर्देशन र साना रहस्य प्रयोग
Boletus मशरूम: लाभ र हानि, ताप सामग्री र संरचना
यो खाद्य कागज: चामल, वफल, चीनी। खाद्य कागज मा मुद्रण
समीक्षा र पर्यटक फोटो: बिन Majid होटल र रिसोर्ट्स4* द्वारा Acacia
बचत बैंक - एक व्यावसायिक वा राज्य-स्वामित्व बैंक?